I-China Chipboard Screws Ukukhiqiza nefektri | Zhanyu
Izikulufu zeHex head self drilling
Ikhanda lenkomishi yeHex socket bolt
Truss ikhanda self imishini sc ...
· Usayizi: M3.5 / M4 / M5 / M6
Qeda: I-phosphorus emnyama / i-Zinc ifakiwe
· Umbala: Mnyama / Mhlophe / Phuzi
· Ukupakisha: 25kg Isikhwama / Ibhokisi elinebhokisi
Izikulufo ze-Chipboard luhlobo lomkhiqizo ofanele ukufakwa kwethuluzi likagesi ngemuva kwenqubo yokwelashwa kokushisa. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuxhumana nokuqinisa phakathi kwamapuleti ezinkuni naphakathi kwamapuleti ezinkuni namapuleti ensimbi amancane. Usayizi u-m3-m6, okokusebenza kungamandla amakhulu c102a, ukwelashwa kwendawo kufihliwe, umbala ngokuvamile uphuzi, uluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe.
Emkhakheni wonke wokuqinisa, lo mkhiqizo ubaluleke njengokomile odongeni futhi unomthamo omkhulu wokuthengisa. Isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni ifenisha nakwezinye izimboni, kepha kusalinganiselwe emakethe ye-DIY. Njengamanje, abathengi basekhaya bathenga lokhu kuhlukahluka esitolo esikhulu sezinto zokwakha, ikakhulukazi esisetshenziselwa ukufakwa kojantshi besiqondisi, amahinji (njenge-3.5 * 16, njll.), Ukufakwa kokunwetshwa kwezinhlanzi (okufana no-4 * 40, njll.), Nokufaka izinkuni esikhundleni ngezikulufo ukufaka nokwakha ifenisha namakhabethe. Ikhwalithi ingcono, ipuleti le-yuan Ling elikhiqizwe yifektri yezingxenye ezijwayelekile zeShanghai lingcono futhi intengo yekhwalithi yekhwalithi ingcono Konga futhi kokonga kuzo zonke izici. Isikulufa sokusika umsila we-fiber board board ngumkhiqizo othuthukisiwe wesikulufa esijwayelekile se-fibreborn. It is ikakhulukazi elungiselelwe kusukela ekwakhiweni kwentambo, ukuphishekela isivinini sokubhola esiphezulu, nokuxazulula inkinga yokuqhekeka okubangelwa ukusetshenziswa kokhuni oluqinile, futhi okuqukethwe kwezobuchwepheshe kuphezulu.
Ngezinga elikhulu, ingathatha indawo yokusetshenziswa kwesikulufa esijwayelekile sokhuni (isikulufa sokhuni ngaphandle kokwelashwa kokushisa). Ngasikhathi sinye, izikulufo zokhuni zikhiqizwa ubuchwepheshe bokuncipha kwenduku okuqale kuhlongozwa yi-AIDS ekuzulazuleni, okungagcini ngokugcina izinto zokwakha, kepha futhi okwenza intambo ibukhali.
Langaphambilini Umucu omubi wentambo eyodwa ye-drywall screw
Olandelayo: Izikulufo ze-CSK zokuzibamba ikhanda
Izikulufu zekhanda le-Truss
Insimbi ejwayelekile yeC-section ye-unistrut iyashisa ...
Ikhwalithi ephezulu carbon steel DIN934 iheksagoni nut m3 ...
Izesekeli zethebula lekhebula, amabhawodi enqola, i-flange ...
ICarbon steel hexagon bolt
I-DIN 741 Hardware, i-Rigging Zinc igcwebe ikhabhoni st ...